Golaha Wasiirada ee Soomaaliya oo Ansaxiyay Xeerka La-dagaalanka Argagixisada – idalenews.com
Golaha Wasiirada ee Soomaaliya oo Ansaxiyay Xeerka La-dagaalanka Argagixisada
Shirkii golaha wasiiirada oo uu shir gudoominayay Raa’isal Wasaaraha Dawladda Federaaliga ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, ayaa manta waxaa lagu ansixiyay xeerka cusub ee la dagaalanka argzgixosada.
Kulankan golaha wasiirada ayaa looga dooday laguna ansixiyay Xeerka La-dagaalanka Argogixisada oo kamid ah qorshaha cusub ee dawladdu ku doonayso inay kula dagaalanto kooxaha argagixisadaa ayna ku hananato gabi ahaanba amniga dalka Soomaaliya.
Xeerkan ayaa lagu wadaa inuu dhawaan gaaro ayna ay ansixiyaan Baarlamaanka Federaaliga ah ee Soomaaliyeed.
“Xeerkani waa mid muhiim ah oo qeyb ka ah qorshaha dawladdu ay kula dagaalamayso argogixisada isla markaana ay ku doonayso in ay si buuxda ugu hano guud ahaan amniga dalka.” ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon oo gudoominayay shirkii golaha wasiirada maanta.
Ugu danbeyn Wasaarada Arrimaha Dibadda ayaa gollaha soo hor-dhigtay qorshaha dib-u habaynta wasaarada iyo xeerka shaqaalaha dibada (foreign service law).
Qorshahan oo ay soo bandhigeen khubaro ka socota wasaarada ayay si buuxda u qeexaya siyaasada arrimaha dibada ee dalka, waxaana uu ahaa mid laysla qaatay.
Dowlada Soomaliya oo C/laahi Sambaloolshe oo ka soo Jeedo Gobalka Hiiraan u magacowdey Safiirka Somalia ee dalka Ingiriiska
Dhageyso: Hadalo Qaraar iyo goodin oo Nabadoonada Beelaha Puntland iyo Muqdisho saxaafada isu mariyeen